Mety tsara ho an’ny mozika rap ny fiteny Kazakh: Antsafa nifanaovana tamin’ilay mpaneho hevitra ara-kolontsaina Yevgeniya Plakhina · Global Voices teny Malagasy
Mampanankarena ny mozika ankehitriny ao Kazakhstan ny fahasamihafam-piteny sy kolontsaina
Voadika ny 14 Oktobra 2021 7:23 GMT
Pikantsary tao amin'ny fantsona YouTube mampiseho ny hira “Agha” miaraka amin'ny tonony amin'ny fiteny Kazakh.
Nahazo ny fahaleovantenany i Kazakhstan 30 taona lasa izay, saingy mbola eo am-pananganana ny firenena amin'ny fiteny, amin'ny tantara ifampizarana ary ny fahasamihafana ara-kolontsaina amin'ireo vondrom-poko miisa 100 mahery monina ao amin'ny fanjakana midadasika ao Azia Afovoany izy. Mitana andraikitra lehibe amin'ny famaritana ny mari-panondroana samihafa ny vondrom-piarahamonina isankarazany, ny lahivavy (miralenta) ary ny sokajin-taona samihafa ny mozika. Raha mahita sy mamerina mandika indray ny mozika nentin-drazana avy amin'ny foko Kazakh mpifindrafindra monina ny mpanakanto sasany, ny sasany kosa mitodika any amin'ny K-pop mba hahazoana aingam-panahy.
Ny Global Voices dia niresaka tamin'ilay mpanao gazety sady mpaneho hevitra ara-kolontsaina Yevgeniya Plakhina, mpandray anjara Global Voices, mba hanome torolalana ho an'ny mozika ho an'ity vakoka manan-karena ity sy hamaha ny fanalahidy marolafin'ny miralenta, fiteny, firesahana, ary ny hafatra ao amin'ny mozika Kazakh ankehitriny.
GV: Nandritra ny taona maro taorian'ny fahaleovantena tamin'ny Firaisana Sovietika dia tany amin'ireo klioba miafina ihany no niparitaka ny sehatry ny mozika hafa tao Azia Afovoany izay vitsy mpihaino, ao anatin'izany i Kazakhstan. Inona tamin'izany no niova ankehitriny ary nahoana?
Yevgeniya Plakhina: Nisy foana ny mozika hafa tao an-toerana, saingy ho an'ny olona voafetra ihany izany, satria mila miseho amin'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny firenena ianao raha te ho lasa malaza. Amin'izao vanim-potoanan'ny aterineto izao, tsy olana intsony izany.
Olana amin'ny fiteny ihany koa izany: Nanjary hita kokoa ny fiteny Kazakh taorian'ny famoretana nandritra ny vanim-potoana sovietika, hatramin'ny faran'ny taona 1980. Ireo mihira amin'ny fiteny Kazakh na Kazakh sy Rosiana mifangaro no mpanakanto tena nahay mamorona indrindra.
Ny fiteny Rosiana no fiteny fanabeazana nandritra ny vanim-potoana sovietika. Taorian'ny fahaleovan-tena dia vitsy ny foko Kazakhs no niteny ny fiteniny tao an-trano, raha nonina tanàn-dehibe izy ireo, satria mbola nanjakazaka tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny fiainana ny fiteny Rosiana. Vitsy ny sekoly mampiasa ny fiteny Kazakh. Niova ny fiheverana ny fiteny ankehitriny. Nikaroka ny mari-panondroana azy ny olona, ​​izay mifamatotra akaiky amin'ny fiteny. Mianatra ilay fiteny ny tanora, ao anatin'izany ireo tsy foko Kazakh, ary mahatsapa izy ireo fa anisan'ny kolontsaina Kazakh. Mpampiasa ny fiteny Rosiana maro koa no nifindra tany ivelan'ny firenena, raha ireo foko Kazakh avy any ambanivohitra kosa nifindra tany amin'ireo tanàndehibe ka nanova ny fifandanjana ho an'ny fiteny Kazakh.
GV: Nahoana no liana tamin'ny mozika Kazakh amin'izao fotoana ianao?
YP: Tsy dia mahay miteny Kazakh aho. Ny renin'ny renibeko grika no niresaka tamiko tamin'ny fiteny Kazakh tamin'izaho mbola kely. Nandritra ny taranaka nifandimby telo mahery, nifandray akaiky tamina fianakaviana foko Kazakh ny fianakaviako ary miteny Kazakh izy ireo niresaka tamiko. Akaikin'ny foko sy ny fiaviako io lova io.
Nanjary fitaovana manan-danja hanehoako hevitra ny mozika. Ny fiolahana dia nitranga nandritra ny fety Halloween natrehiko: Ghalym Moldanazar, izay lasa kintan'ny mozika Kazakh ankehitriny, nitendry ny hirany tao amin'ny trano lehibe iray feno olona mihiaka ny anarany. Tsapako fa tsy fironana tandrefana fotsiny ihany ny mozika indie. Nanana dika novaina avy ao an-toerana aho. Taorian'ny fihainoana ny tarika G.H.A.D., dia takatro ihany koa fa manana fiteny tena politika, manakaiky ny fikatrohana ity karazana mozika rap ity. Heveriko fa tonga lafatra ho an'ny rap ny fiteny Kazakh, ary mahavariana ny gadony, mifangaro amin'ny lahatsoratra politika ao amin'ny toe-java-misy ao an-toerana.
GV: Inona no nahatonga anao hamorona playlist?
YP: Namorona an'ity playlist ity aho hiomanana amin'ny lahateny momba ny fampitam-baovao Kazakh izay natolotro ny mpianatra Amerikana. Tsy dia mahalala firy momba ity firenena ity ny olona, ​​mety hanonona hoe Borat izy ireo na ireo fanovana marobe amin'ny anaran'ny renivohitra. Mahatonga ny olona hahatakatra bebe kokoa ny kolontsaina hafa ireo vokatra ara-kolontsaina toy ny sinema sy mozika, noho izany, nomaniko ity playlist mozika ity izay nanomboka amin'ny taona 2000 – 2020. Rehefa nandefa azy aho, na ny Kazakhstanis eo an-toerana aza dia nizara izany. Manavao tsy tapaka ilay playlist aho, ka mbola eo am-pandrafetana ny tetikasa. Nijery tao amin'ny tambajotra sosialy aho ary manontany ny olona ny zavatra tiany na henoiny, ary manampy iditra vaovao, ao anatin'izany ireo hira fahiny.
GV: Inona ny hira tianao indrindra ao amin'ilay playlist nataonao ary nahoana?
YP: Roa no soso-kevitro: “Undeme” hirain'ny The Buhars. Tiako ny feon'ilay vehivavy mpihira, ary zava-maneno nentin-drazana no ampiasain'izy ireo amin'ny mozikan'ny ankehitriny.
YP: Ary ny faharoa, ny “Agha” hirain'i Irina Kairatovna sy Kairat Nurtas no nosafidiko. Hira Funky ilay izy: midika hoe “dadatoa” ny hoe “Agha”, saingy raha amin'ny fomba fiteny dia milaza lehilahy manana fitaomana lehibe kosa izy eo amin'ny fiarahamonina. Maneho ny mozika malaza re matetika amin'ny mariazy i Nurtas. Noho izany dia toy ny fifangaroan'ny tontolo roa tsy mitovy izy io.
Indro ny playlist feno nataon'i Plakhina ao amin'ny YouTube miaraka amin'ny hira miisa 40 mba hahitanao sy hankafizanao ny mozika Kazakh ankehitriny:
Azonao atao koa ny mandre ny ankamaroan'ny hiran'i Plakhina amin'ity playlist Spotify ity :